Yesikolo ka-Swedish kuba immigrants, Imfundo kuba ngabantu abadala kwi-Sweden - IVIDIYO INCOKO - EWE!
Kodwa mna wavunyelwa ukuba athabathe amanye iifoto kwaye ndiza kukubonisa. Yintoni eyahlukileyo, kwaye iya kubonisa malunga imeko-bume esingqongileyo apha, ukuba ndibe kuthi ngoko. Kwaye mna zilawulwe ukwenza udliwanondlebe i-rector. Ndiyathemba kuya kuba kakhulu umdla. Ndicela ezinye ebalulekileyo imibuzo. Jikelele, begin kunye nemifanekiso kwaye ukuqhubeka enze udliwano-ndlebe. Ngokwenene, makhe siqale corridor ye-corridor. Yonke into babecocekile, coca. Ngoko ke kukho iholo. Kukho kwi-umva le ngaxalimbi kunye iincwadi, iincwadi free ukuthatha, ukufunda baze babuyele. Ngoko ke kukho igumbi kwi-hallway rhoqo indoda yempumlo, abantu bahamba, eli gumbi lixhotyiswe soundproofing, kwaye ke, uzole, kunyulo olunoxolo, unako ukwenza kuni, akukho namnye interfered. Oko kukholisa ukwenzeka rhoqo vula. Kanjalo, zonke izikolo zi equipped kunye iikhompyutha, iikhompyutha udityanisiwe kwi Internet, ayinako ukuba nihlale, ukwenza.
Ngoko ke, le Bhodi, rhoqo ibonise kwi esikolweni.
Kukho kanjalo ads unako ukuthenga, ngalo iincwadi zabo, kusetyenziswa iincwadi ukugcina abanye penny. Kanjalo, zonke izikolo zi equipped kunye izixhobo - iti, ikofu, chocolates, burgers, abanye appetizers ingaba ezincinane, bite ukuba badle. Kuyo yonke esikolweni kukho uluhlu lophinda-phindo kwi-Sweden kakhulu kwaphuhliswa, hayi ukuba kwaphuhliswa, kwaye abantu abaninzi ukuzithwala ukutya kwi-plastic containers. Apha yinto eqhelekileyo, akukho namnye ngu embarrassed, idla zonke kuzisa ukutya ukutya ngexesha okunqanda, pauses.
Kukho microwave ukuba ubushushu ukutya, refrigerator, kukho kettles ngamanzi.
Ngoku lithuba yethu yesibini inxalenye ividiyo, enze udliwano-ndlebe. Esikolweni, eneneni, akukho nto ngakumbi ukuba umxelele.
Mnandi okubonakalayo enze udliwano-ndlebe.
GRATUITĂ Fără înregistrare, italiană
esisicwangciso-mibuzo roulette ngaphandle ubhaliso i-intanethi Dating ividiyo dating site kuba ezinzima esisicwangciso-mibuzo roulette free free ividiyo acquaintance ngaphandle nokubhalisa ne-girls ividiyo ukuncokola nge-girls free ividiyo Dating abafazi ividiyo iincoko free ngaphandle ubhaliso ividiyo incoko kunye guys ividiyo incoko amagumbi Dating girls free